UMYILI WEZINXIBO ZOMTSHATO KAPIPPA MIDDLETON IINKCUKACHA: IIFOTO - IINDABA ZOMTSHATO
Eyona Iindaba Zomtshato UMyili wengubo yomtshato kaPippa Middleton uGiles Deacon wabelana ngeenkcukacha ngasemva kwesinxibo: Jonga iifoto
UPippa Middleton, udade ka-Catherine wase-Bhritane, iiDuchess zaseCambridge, ufike emtshatweni wakhe kuJames Matthews kwi-St Mark's Church e-Englefield, kwintshona ye-London, nge-20 ka-Meyi ka-2017. (Ityala: JUSTIN TALLIS / AFP / Getty Izithombe)
Ngu: Esther Lee 05/20/2017 ngo-10: 17 AM
Ndikunye noPippa Middleton noJames Matthews ngoku abatshatileyo ngokusesikweni, ukukhanya okwethutyana kushenxisela umyili waseBritane uGiles Deacon, nowenze ilokhwe yomtshato yomtshakazi yabatshatayo ebibanjwe ngoMgqibelo, nge-20 kaMeyi.
Umdikoni, oneminyaka engama-47, ukhuphe ingxelo ngethuba umtshakazi onwabile engena kwicawa yakhe yobuntwana, iSt Mark's e-Englefield, ngenjikalanga yangoMgqibelo ecacileyo. Ekhatshwa ngudadewabo, iiDuchess zaseCambridge, uKate Middleton, kunye notata wakhe, uMichael Middleton, umolokazana wakhazimla kwaye wakhanyisa uncumo lwe-mega-watt njengoko wayebuza abafoti kwisinxibo sakhe.
Ndonwabe kakhulu kukusebenza noPippa kwilokhwe yakhe yomtshato, utshilo uDeacon kwingxelo. Isinxibo sakhiwe ngomkhono wekepusi, intamo ephezulu kunye neempawu zomzimba ezihonjisiweyo kunye ne-draping ngaphambili kunye neenkcukacha ezimile ngentliziyo ngasemva.
Uye wongeza, I-bespoke ye-silika yomtya womqhaphu yasetyenziswa ngesandla ukwenza ingcinga yengubo engenawo 'umthungo.' .
ENGLEFIELD GREEN, ENGLAND - NGOMEYI 20: UCatherine, iiDuchess zaseCambridge zilungisa ilokhwe kaPippa Middleton xa engena ecaweni ngexesha lomtshato kaPippa Middleton noJames Matthews kwiCawe iSt Mark ngoMeyi 20, 2017 e-Englefield Green, eNgilane. (Ifoto ngu-Samir Hussein / Samir Hussein / WireImage)
UPippa Middleton kunye nomyeni wakhe omtsha uJames Matthews bayishiya icawe emva komsitho womtshato wabo eSt Mark's Church njengokuba oomolokazana kunye nabafana bephepha behamba phambili nge-20 kaMeyi 2017 e-Englefield Green, eNgilane. (Ifoto ngu-Justin Tallis-I-WPA Pool / imifanekiso ka-Getty)
Njengodadewabo, uPippa wakhetha isinxibo esimhlophe esimhlophe. IiDuchess zaseCambridge zazinxibe ilokhwe yesiko eyenziwe nguSara Burton ka-Alexander McQueen kumtshato wakhe ka-2011.
Umtshakazi, nangona kunjalo, utshayele ii-tresses zakhe kwisinwele esihle esimenyezelayo, kwaye isigqubuthelo sakhe-into ebunjiweyo eyenziwe ngumgumbi wokugaya uStephen Jones-yayiqulathe i-tulle eneeperile ezimfakamfele. URobinson Pelham ubonelele ngesixhobo seenwele kunye ne-tiara, kwaye uPippa ukhethe iimpompo zikaManolo Blahnik zokuhamba kwakhe ezantsi.
Into enomdla kukuba, kukho unxibelelwano losapho phakathi komdikoni kunye nosapho lakwaMiddleton. Imigca yabo ilandelela kwi-County Durham. Umdikoni kwakukudala ehletyelwa ukuba abe ngumyili wengubo yomtshato kaPippa emva kokuba ebonwe engena ngaphakathi nangaphandle kwendlu yakhe eneengxowa zeengubo emva kokuzibandakanya kwakhe ngehlobo lasehlotyeni.
ulwamkelo lomtshato kuphela iisampulu zokubhalwa kwamagama
Isoftware yoyilo efanelekileyo
imitshato yesilivere yakhe kunye neyakhe